Indlu yasefama yaseFransi enechibi labucala kunye ne-wifi
Izindlu zeeholide ezi-2 zirente kunye. Ithafa evaliweyo ejongene nedama lokuqubha labucala, iwifi, isitovu somthi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, intendelezo enomthunzi, uhambo olunokwenzeka lokuya kwifama yamaFrentshi ekufutshane, izifundo zemosaic xa uceliwe, izixhobo zomntwana, ibbq, imidlalo yebhodi, iincwadi, imidlalo yangaphandle, ingqokelela yeeDVD yomdlali wedvd njl.
Le yindawo entle yasemaphandleni emazantsi eNtili yeLoire eneendawo ezininzi ezinomtsalane ze-chateaux / iinqaba kunye neelali ezintle. Le ndlu yasefama izolile kwaye ijikelezwe yimithi yeziqhamo kunye nokuhamba kwemithi, kufutshane neendawo zangaphambili (i-troglodyte caves e-St Remy) kunye neelali ezinje ngeGrand Pressigny. Nangona kunjalo kukho imizuzu emihlanu yokuqhuba ukuya kwilali yasekhaya kunye nemizuzu elishumi yokuqhuba ukuya kwidolophu ekufutshane.
Indawo yokupaka simahla eseyadini – ineendawo eziyi-12
Nalu uluhlu endiluqulunqeyo lwezinto ezintle ekufuneka zenziwe kunye neziganeko ezisingqongileyo....
Les Bodins imveliso yeqonga ehlekisayo kwifama elahliweyo
Inqaba yeLe Grand pressigny enemyuziyam malunga nomntu wangaphambili,
imivalo enezihlalo zangaphandle zokubukela ilizwe lidlula, iindawo zokutyela, ivenkile yodongwe kunye nezifundo zomdongwe, ukuqesha ibhayisekile.
I-Descartes inepaki encinci yezilwanyana, idama lokuqubha elinesilayidi, indawo yokudlala yabantwana, i-Kayaking, imarike ngeCawa kusasa,
Descartes museum kwindlu awazalelwa kuyo.
I-Futuroscope (malunga ne-45min. qhuba)
Ukhenketho, beka iPlumereau kwindawo yakudala yedolophu kunye nebala layo elimnandi le-ayisikrimu, imivalo, iindawo zokutyela, uloliwe omncinci ukuya kukhenketho olukhokelwayo lwenxalenye yakudala yesixeko.
Imarike yeLoches, inqaba
Imiqolomba yeTroglodyte eSt Remy sur Creuse ... Ethnicité.
La Haute Touche...ipaki ye-safari.
Umnyhadala wokwenza iJam, Abilly
Ukutyibiliza emkhenkceni eChatellerault
I-Chinon yokungcamla iwayini
iintengiso ezininzi zeekhabhuthi
iindawo ezininzi zokuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile
Sihlala kwikona ukusuka kwindlu yasefama kwi-hamlet encinci kwaye singabakho nanini na xa usifuna. Ndiyaqonda ukuba ezinye iindwendwe ziyathanda ukushiywa ngoxolo kwaye ezinye zithanda ukuncokola kamnandi. Im happy xa wonwabile so xa ndikubulisa sobona ukuba kuhamba njani. Abanye abantu baya kuthanda ukuba abantwana babo badlale nabam ukuze badibane kwibala elikhulu yaye abanye bakhetha ukuphumla kanye njengentsapho. Ndixelele indlela oziva ngayo kwaye njengoko benditshilo ngaphambili .... ndonwabile xa wonwabile :-)
Sihlala kwikona ukusuka kwindlu yasefama kwi-hamlet encinci kwaye singabakho nanini na xa usifuna. Ndiyaqonda ukuba ezinye iindwendwe ziyathanda ukushiywa ngoxolo kwaye ezinye zith…